Oxymoron နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း Martech Zone
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 22, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အထက်တန်းကျောင်း (နှင့်ယခု) တွင်အတန်းထဲတွင်လူရွှင်တော်အတော်အတန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်မှာတစ်နှစ်လောက်အင်္ဂလိပ်စာဆရာတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်၊ သူ့နာမည်က Mr. Morgan ပါ။ မစ္စတာမော်ဂန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အချိန်အများစုသည်စာသင်ခန်းပြင်ပတွင်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ရှိတ်စပီးယားကိုတန်ဖိုးမထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအရူးမစ္စတာမော်ဂန်မောင်း။
တစ်ခါကမစ္စတာမော်ဂန်ကသူ၏ swanky Yale-ish အသံထွက်တွင်၊ ဟမ်းလက်တွင်ရှိတ်စပီးယားတွင်သုံးသောစာပေနည်းစနစ်များကိုမေးမြန်းသောအခါကျွန်ုပ်လက်ကိုစိုးရိမ်တကြီးထခဲ့သည်။
မစ္စတာမော်ဂန်က“ ဟုတ်တယ်၊ မစ္စတာကာ့?”
“ သေချာတာပေါ့!” ငါပြောတာကမစ္စတာမော်ဂန်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဆက်စပ်မှုကိုပြောတာပါ။
ကျွန်ုပ်မှန်ကန်သော်လည်းမစ္စတာမော်ဂန်သည်ကျွန်ုပ်၏ဟာသဉာဏ်ကိုတန်ဖိုးမထားနိုင်သေးသော်လည်းသူကကျွန်ုပ်အားတံခါးကိုပြသခဲ့သည်။ (ငါ့ပါးစပ်မှလာသည့်စကားလုံးများစွာပါသောစကားလုံးများကိုကြားရသောအခါ) ၎င်းသည်အတန်းမှအတော်လေးရယ်ခဲ့သည်။
Oxymoron ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ဘူး။ ဒီနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုများလာပြီးအံ့သြမိပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုတခုလိုအသံထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် oxymoron ကိုသင့်ရဲ့စျေးကွက်ထဲဒါမှမဟုတ်နည်းပညာတင်ဆက်မှုထဲမှာထည့်ပါ။ ဒါဟာရှေးရှေးယနေ့ခေတ်ကချစ်ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီအရာတော်တော်များများဟာအခု Geekipedia မှာရှိနေပါပြီ။
ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု - ထို developer များသည်ရယ်စရာကောင်းသည်။ လွှတ်ပေးရန်နောက်ကျဆဲ
လျှောက်လွှာ Programming Interface ကို - လျှောက်လွှာအစီအစဉ်များကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့။
ဉာဏ်ရည်တု - ဒါဟာအတုမဟုတ်ဘူး၊
စွမ်းအင်အခြားနည်းလမ်းများ - စွမ်းအင်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာမှောင်မိုက်သောအရာများဖြစ်သည်။
ဖော်ရွေသော URL - ဆိုလိုသည်မှာ URL ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
အင်တာနက်ရေဒီယို - အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုရင်ရေဒီယိုမဟုတ်ဘူး
ဒေါ်လာ ၁၀၀ လက်ပ်တော့ပ် - စွမ်းအင်? အင်တာနက်သုံးလို့ရလား
net ကတိုက်ရေး - မည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်၏ကြား၏ Akamai or S3?
User Interface - ဒါကကွန်ပျူတာအတွက်ပဲ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟုတ်ပါ (စိတ်မကောင်းပါ) ၎င်းသည်နေရာချထားမှုဖြစ်သည်။
ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှု - ပေါင်းစည်းလိုက်ရင်တစ်နေရာရာမှာချုပ်ရိုးရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံး oxymoron ကဘာလဲ?
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းအီးမေးလ်ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း - ဝယ်ယူမှုမဟာဗျူဟာ